दसैं बजार : छुट कि ब्रह्मलुट - Karobar National Economic Daily
दसैं बजार : छुट कि ब्रह्मलुट
query_builderSeptember 17, 2017 10:44 AM supervisor_accountशिवराज खड्का visibility397
पछिल्ला दिनहरूमा पत्रपत्रिकादेखि आमसञ्चारमाध्यममा फलानो मन्त्रीद्वारा अनुगमन, सुटुक्क छड्के, छापा मारेको, सिलबन्दी गरेको जस्ता समाचार प्रशस्त देख्न, सुन्न र हेर्न पाइन्छ ।
निकै गर्वका साथ मन्त्रीका दलबलसहितका टोलीले गाडीको लावालस्कर यता र उता गरेको देख्न सकिन्छ । तर, परिणाम भने शून्य छ । न त गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने हिम्मत राख्न सक्छ, न सही काम गर्नेलाई प्रोत्साहित । धेरैजसोले त केवल चर्चामा आउन मात्र हल्लाखल्ला गरेको पाइन्छ ।
बिनापूर्वतयारी तथा गोप्य ढंगले नजाने वा खबर गरेर तयार भएर बस आउँदैछौं भनेर सूचना चुहाउने र जनताको अगाडि तँ कुटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु भनेझैं बेला–बेला वा विभिन्न चाडपर्व नजिकिएपछि वा नयाँ मन्त्री आएपछि यस्ता तामझामका हर्कत देख्न पाइन्छ ।
खुलेआम उपभोक्ता ठग्न पाउनुपर्छ भन्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने सरकारको मन्त्रीका अनुगमनको कुनै तुक राख्दैन । त्यसो त अनुगमन भनेको एउटा सामान्य कर्मचारीले गर्ने काममा मन्त्रीजस्तो गरिमामय व्यक्ति पसल–पसल चहार्दै खरिद–बिक्रीका बिल खोज्दै हिँड्नु कतिको सुहाउँला ?
नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गराउने एउटा निर्णायक तहमा वा निर्देशन दिने तहको जिम्मेवार व्यक्ति ताल्चा मार्न कुद्नु पदीय हैसियतले के उपयुक्त हो ? तिनको अनुगमनपछिको निर्देशन पालना नभएको र कारबाहीको भागिदार नबन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य कसले गर्ने भन्ने यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।
विभिन्न ठूला चाडपर्व, महोत्सव तथा अवसरहरूमा नेपाली बजारमा उपहारको बहार नै आउने गर्छ । वर्षैपिच्छे व्यापारीले ल्याउने यो योजना यसपालि दसैंमा पनि देखिन थालिसकिएको छ । उद्योगी, व्यापारी र उपभोक्ताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ ।
एक–अर्काबिनाको बजार नै अपुरो हुन्छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर पछिल्लो समयमा रेडियो, इन्टरनेट, टेलिभिजनमा बज्ने र देखिने विज्ञापन होस् वा पत्रपत्रिका, होर्डिङबोर्ड, भित्तोलगायत विभिन्न स्थानमा टल्किने पोस्टरका उपहार विज्ञापनले दसैंतिहारलाई नजिक्याएको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।
प्रतिस्पर्धी बजारमा छुट, बोनस, उपहारमार्फत उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न विभिन्न व्यवसायी कम्पनी, घराना, व्यापारिक संस्थाहरूको होडबाजी यसपालि पनि चलेको छ र हामी सबैलाई यो पनि थाहा छ कि नाफा वा नोक्सानमा उपहारको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । तर यो प्रक्रिया झन्–झन् बढ्दो क्रममा छ । दैनिक प्रयोग गरिने उपभोग्य सामग्री खाद्य, पेयपदार्थ, लत्ताकपडा, जुत्ता, मोबाइलजस्ता धेरैले प्रयोग गर्ने वस्तुका उत्पादक र विक्रेता मात्र होइन; मोटरसाइकल, टिभी, फ्रिज, गाडी, घर, जग्गाजस्ता विक्रेताले पनि उपहार योजना ल्याउन थालेका छन् ।
बैंकहरूले दसैंतिहारलाई लक्षित गर्दै घरजग्गा तथा गाडीमा सस्तो ब्याज र सेवाशुल्कमा ऋण स्किम ल्याउन थालेका छन् । सबै क्षेत्रमा उपहार दिनेको होडबाजी नै चल्न थालेको छ । बढ्दो महँगीमा उपभोक्तालाई भने दसैंले खासै छोएको देखिन्न । जागिरेले दसैं भत्ता तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले नाफाबाट लाभांश पनि प्राप्त गरेका हुन्छन् ।
विदेशमा काम गर्न तथा अध्ययन गर्न गएकाहरूले पनि दसैंतिहारमा नेपालमा रहेका आफन्तजनलाई अरू बेलाभन्दा बढी रकम पठाउँछन् । यसैलाई ध्यान दिएर विशेष गरी उत्पादक एवं विक्रेतालाई त अहिले आफ्नो व्यापार कसरी बढाउने भन्ने चिन्ताले छोएको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाली बजारमा विक्रेताहरूले विभिन्न योजना र छुटका अफरहरू ल्याउने गरेका छन् ।
दसैंतिहारजस्ता ठूला चाडमा अन्य समयको तुलनामा सामान बिक्री गर्न सुनौलो अवसर ठान्दै उपभोक्तालाई आफूतिर लोभ्याएर आकर्षित गर्न विभिन्न व्यावसायिक योजनाहरू ल्याउँछन् । योजनाअन्तर्गत ग्राहकलाई आफ्नो तौलअनुसारको रकमदेखि खसी, ल्यापटप, गाडी तथा विदेश भ्रमणसम्मका उपहारै उपहार राखिएका छन् ।
प्रायःले स्क्य्राच कुपनमार्फत हातहातै उपहार दिने गर्छन् भने कतिले छुटको अफर राखेका हुन्छन् । दसैंतिहारमा मात्र उत्पादक कम्पनी र विक्रेताले करोडौं रकम कारोबार गर्छन् । दसैंतिहारमै सामानहरू खरिद गर्न भनेर पैसाको जोहो गर्नेहरू प्रशस्तै हुन्छन् । उनीहरूलाई नै आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न उत्पादकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न विभिन्न उपहार योजना ल्याउने गर्छन् ।
यो समयलाई कतिपयले नाफा–घाटासँग नजोडेर व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिने गर्छन् । यस्ता प्रतिस्पर्धाले कम्पनीको विज्ञापन, व्यापार प्रवद्र्धन र ब्रान्डिङ गर्न सघाउ नै पु¥याउँछ । केही वर्षयता भने उपभोक्ता उपहार पर्नेमा ढुक्क देखिन्नन् । यो ठगिने मेलो मात्र भएको कतिपयको ठम्याइ छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक कारोबारको समयमा ग्राहकलाई ठग्न केही व्यक्तिलाई (जो आफन्त हुन्छन्) उपहार परेको देखाइने गरेको गुनासो छ । कतिले त उपहारको विज्ञापन मात्र गर्ने र उपहार नराख्ने गरेको पनि पाइन्छ । उपभोक्तालाई झुक्याएर मिति गुज्रिसकेका पेय तथा खाद्य पदार्थहरूमा उपहारको लोभ देखाई स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने खालका अहितकर वस्तुहरूको पनि यो हूलमूलमा खुलमखुला बिक्री–वितरण भइरहेको उपभोक्ता र यसका सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।
ठूला चाडपर्वहरूमा सम्बन्धित निकायले पनि चनाखो हुनु आवश्यक देखिन्छ । नागरिकका स्वास्थ्यसँग जोडिएका गम्भीर विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । कतिपय उपभोक्ताहरू यही उपहार र छुटलाई कुरेर आवश्यक सामग्रीहरू खरिद नगरी बसेका हुन्छन् । नक्कली, पुराना तथा उपभोग समय गुज्रिसकेको सामानमा पैसा बेकार खेर जानेछ । व्यापारीहरूले पनि दसंै पेस्की, बोनस, पेन्सन, सञ्चयकोषजस्ता सुविधा पाएर क्रय क्षमता बढेका बेला ग्राहकलाई आकर्षित गर्न यस्ता योजना आउने गरेका छन् ।
दसैंतिहारमा आउने यस्ता विज्ञापनले बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोगी भूमिका पनि निर्वाह गर्छ भने विज्ञापनको हिस्सामा पनि वृद्धि हुन पुग्छ । नेपाली बजारमा उपहार संस्कृतिको विकास बढिरहेको छ । यस्ता गतिविधिले आमउपभोक्तामा नुनदेखि सुनसम्म उपहार खोज्ने संस्कार, बानी, परम्पराजस्तै बनिसकेको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री मात्र होइन, जुनसुकै घरायसी सामानमा उपहार खोज्ने बानी नै परिसकेको छ ।
उपहारको नाममा बिक्री गरिने उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर राम्रो नहुन पनि सक्छ । यसतर्फ उपभोक्ता पनि सचेत देखिन्नन् । उपहार दिएर उपभोक्ता आकर्षित गर्नु आफैंमा नराम्रो त होइन, त्योभन्दा पनि गुणस्तरतर्फ कम्पनीहरूको विशेष ध्यान जान सक्यो भने उपभोक्तामा कम्पनीप्रति सकारात्मक छाप पर्न जान्छ । कसैको आर्थिक फाइदाका लागि धेरै मानिसलाई बेफाइदा नहोस्, उपहार र विज्ञापनसँगै सामानमा गुणस्तर पनि होस् ।
गुणस्तरहीन सामान ल्याएर उपहार र विज्ञापनको भरमा बजार लिन खोज्नुले दीर्घकालीन व्यापार गर्न खोज्नेलाई अवश्य पनि फाइदा पुग्दैन । उपहार र छुटमा विभिन्न स्वरूप र तरिका अपनाए पनि एउटै उद्देश्य सबैभन्दा बढी ग्राहकलाई आकर्षित गर्नु हो । तर, उनीहरूले बिर्सनै नहुने भनेको आफ्ना ग्राहक एकपटकलाई बनाउने वा विश्वास दिलाएर वर्षैपिच्छे थप गर्दै लैजाने व्यवसायी एवम् व्यापारीका हातमा रहन्छ ।
यस्ता योजनाहरू उपभोक्तामुखी र उनीहरूको हितमा हुन जरुरी पनि छ । चासो यति मात्र हो; उपहार, चिट्ठा, छुटका नाममा कुनै पनि सर्वसाधारणले व्यापारी तथा उपहारकर्ताबाट ठगिनु भएन । यसतर्फ उपभोक्ता हितका संस्था, सरकारी अनुगमनकारी निकाय र उपभोक्ताले सचेत रहनु अनिवार्य छ ।
राज्यले पनि उपभोक्तालाई विभिन्न उपहार, छुटका नाममा नक्कली सामान बिक्री गर्ने, सामान बिक्रीबाट आउने राजस्व राज्यकोषमा दाखिला नगर्ने, लुकाउनेमाथि निर्भीक भएर हिम्मतका साथ कारबाही नगरेसम्म अनुगमनको अर्थ पनि रहन्न र सही व्यापार–व्यवसाय गर्नेमाथि सधैंभरि नाफा तथा कमिसनखोरी छलकपट गर्नेहरूकै हालीमुहाली रहिरहन्छ । यसतर्फ विशेष ख्याल गर्न आवश्यक छ । अन्यथा छुटको नाममा ब्रह्मलुट भइरहने पक्का छ ।